> Resource> Naghachi> NTFS Drive Data Recovery: Olee naghachi Data si NTFS Disk
Enwere m ike Naghachi Data si formatted NTFS Drive?
M na-ezighị formatted a nkebi na kọmputa m. Ọ bụ a NTFS disk. M nwere nza nke bara uru foto na vidiyo na na mbanye. Ugbu a, ha niile n'anya. M mkpa n'ezie m faịlụ azụ. Nwere ike onye biko nyere m aka? Ekele.
NTFS bụ a ọkọlọtọ faịlụ usoro nke Windows os. N'ihi na ya ùgwù nke nnukwu faịlụ ebufe na faịlụ izo ya ezo, ọzọ na ndị ọzọ Windows ọrụ na-eji ya na ha ike draịva. Otú ọ dị, data on NTFS mbanye ka nwere ike ga-efu ruru disk formatting, faịlụ nhichapụ, usoro njehie na ihe ndị ọzọ. A ngwọta dị mkpa mgbe izute a NTFS disk data ọnwụ nke.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ a NTFS mbanye data mgbake omume na-enyere gị iji naghachi ehichapụ ma ọ bụ formatted data gị NTFS disk na mfe na mma-ụzọ. Site n'enyemaka nke a usoro, ị ga-enwe ike naghachi faịlụ dị ka videos, photos, ọdịyo faịlụ na ndị ọzọ si NTFS ike mbanye na gị Windows kọmputa.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke usoro ihe omume na-agbake data si NTFS disk ugbu a.
Naghachi Data si NTFS mbanye ke 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Biko adịghị wụnye ihe omume na NTFS ụgbọala na gị data furu efu si.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite NTFS mbanye data mgbake
Dị ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru, ị ga-esi 3 mgbake ụzọ mgbe launching usoro ihe omume. Ị nwere ike na-agụ ha ntụziaka nlezianya ịmụta otú ha na-arụ ọrụ.
Ebe a, na-agbake furu efu ma ọ bụ ehichapụ data si NTFS disk, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode mbụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na data furu efu ruru NTFS mbanye formatting, biko họrọ "nkebi Iweghachite" mode.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị NTFS mbanye anya n'ihi na furu efu data
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ mbanye akwụkwọ ozi nke NTFS disk na ị na-aga na-agbake data si na pịa "Malite" button ka usoro ihe omume ike iṅomi ya.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data si NTFS ike mbanye
Mgbe scanning, niile achọpụtara faịlụ gị NTFS ike mbanye ga-egosipụta na "File Pịnye" ma ọ bụ "nchekwa" edemede. Ị nwere ike ele mbụ faịlụ aha elele ma gị furu efu data nwere ike agbapụtawo ma ọ bụ.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa akara faịlụ gị mkpa na iti on "Naghachi" button na-azọpụta ha azụ gị na kọmputa.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko adịghị na-Natara faịlụ azụ ha mbụ partitions na kọmputa gị.